बाँस र नियालोसंग व्यस्त ८० वर्षीय बाडी - नेपालबहस
बाँस र नियालोसंग व्यस्त ८० वर्षीय बाडी
| १६:०५:५९ मा प्रकाशित
२८ जेठ,लमजुङ । सेतै फुलेको दारी, कपाल । चाउरिएका मुहार । शिरमा टाका टोपी, शरीरमा भोटो र कच्छाड र खुट्टामा एक जोर चम्पल । यति मात्र नभई हातमा लिएको हँसियाले बाँस, नियालोको चोयासँगै रमाउछन्, दोर्दी गाउँपालिका—३ नौथर शेराका ८० वर्षीय बाडी गुरुङ ।
आराम गरेर बस्नुपर्ने उमेरमा युवाहरु भन्दा व्यस्त छन् उनी । कोरोना संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाका बीचमा समेत उनी बिहान कुखुराको भाले बाँसेसँगै उठ्छन् । हातमुख धोएपछि आफैँ खाजा बनाएर खान्छन् र थाल्छन पसिनाको व्यापार उसैमा उनको सीप झल्किन्छ र पेशा चल्न थाल्छ । कहिले बाँस तथा नियालो लिन घरबाट एक घण्टा टाढा श्रीमञ्जाङका गाउँहरुमा पुग्ने गर्छन । बाँस तथा नियालो काटेर आफैँले नै बोकेर घरसम्मै ल्याउछन् ।
यतिकैमा उनको पेशा रोकिन्न । अनि बाँस तथा नियालो खुर्किन र काट्न तथा चोयाको सामग्री बनाउनका लागि तयार गर्छन । त्यसपछि स्याखु, डोको, थुम्से, नाम्लो, नाङ्लोलगायतका सामग्री बुन्छन् । उनको यस्तो सीप तथा जाँगर देख्दा जो कोही पनि मोहित पर्ने गर्दछन् । कम बोल्ने तथा लजालु स्वाभाव भएकाले जो कोही सँग हतपत खुलेर कुरा गर्नु मादैनन् । आफूसरहका अरु बुढापाकाहरुसँग पनि बसेर उनी समय खर्चिदैनन् । उनी भन्छन्, “अरुसँग गफिएर बस्नुभन्दा त आफ्नो सीप अनुसारको काम ग¥यो भने दुई÷चार पैसा पनि आम्दानी हुन्छ ।”
उनलाई भेट्ने अधिकांश मानिसले उनको काम तथा सीपको बारेमा र उनको जीवनको बारेमा चासो राख्ने गर्दछन् । कतिपयले उनले यस उमेरमा पनि यस्तो काम बाध्यताले गरेको होला भन्ने ठान्छन् । उनलाई काम नगरी खानै नपुग्ने अवस्था पनि छैन । उनका छोरा बुहारी रोजगारीको सिलसिलमा घर बाहिर रहेका छन् भने दुई वटा नाति उनीसँगै बस्दछन् । आफ्नो कमाइले तीनजनालाई सजिलैसँग पुगेको उनी बताउछन् ।
उनको यो पेशा बाध्यता नभई जानेको सीप र फुर्सदको समय सदुपयोग गरेका हुन् । उनले भने, “सानै हुँदा लेकमा गोठालो जाँने बेलामा जानेको सीप घर फर्के पछि २० वर्षदेखि यही पेशा गर्दै आइरहेको छु । स्वास्थ्यले साथ दिउञ्जेल काम गरिरहने छु । बेलामा पढाइ पनि भएन, अरु पेशा पनि जानिएन । आफूले जे जानेको छ, त्यही गर्ने त हो नि ।”
उनलाई केही काम नगरी त्यतिकै घरमा बसेर समय कटाउन निकै गाह्रो लाग्छ । उनी भन्छन्, “यसरी काम गर्दा दिन बितेको पत्तै हुँदैन । दिन पनि कटाउन सजिलो, आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।” उनको सीप बिक्री गरेर आएको आम्दानीले घर खर्च चलेको छ । उनले बुनेका स्याँखु, डोको, थुम्से, नाम्लो, नाङ्लोलगायतका सामग्रीबाट महिनामै कम्तिमा पनि २५÷३० हजार रुपैयाँ सजिलै कमाइ हुन्छ । एक दिनमा एउटा स्याखु बुनिसक्ने, डोको, थुम्से, नाङ्लो त एक दिनमै तीन वटासम्म तयार गर्ने गरेको उनले सुनाए । उनले बुनेका प्रति स्याखु रु ८००, डोको, थुम्से रु ३००, चाल्नो रु ५०० मा सजिलै बिक्री हुने गरेको छ ।
यस गाउँमै उनले मात्र यस्तो पेशा गर्ने भएकाले घरमै नै ती सामग्रीहरु लिन आउने गरेकाले बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । यतिबेला त खेतिपाती गर्ने समय आउन थालेकाले माग पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ती सामग्री लिनका लागि नौथर शेरा, रामचोक बेँसी, श्रीमञ्जाङका विभिन्न गाउँ, बगर गाउँलगायतका वासिन्दाहरु आउने गरेको गुरुङले बताए ।
उनले भने, “जताततै कोरोना महामारी आएको छ भन्छन्, तर मलाई त केही थाहा छैन, सधैं यी काममा मात्र ध्यान जान्छ ।” आफूले गाउँका युवाहरुलाई आफूले जानेको सीप सिकाउन खोज्दा कसैले पनि चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । “भोलिका दिन यस्ता सामग्रीहरु लोप हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ” उनी भन्छन्, “युवाहरु काम नपाएर विदेश जान रुचाउँछन् तर विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ घरमै बसेर हुनेतिर कसैको ध्यान छैन ।” यो पेशालाई आफूले सकेसम्म अझै केही वर्ष निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
फस्टाउदै बाँस बिक्री व्यवसाय ४ महिना पहिले
निगालो र बाँसका सामग्रीको कारोवार वृद्धि ८ महिना पहिले
अविरल वर्षाले २४ घरपरिवार विस्थापित भर्खरै
माछापोखरीमा डुबेर वेपत्ता युवकको शव फेला ७ मिनेट पहिले
सरकारी कार्यालयका कल डिटेल सार्वजनिक गरौं ९ मिनेट पहिले
श्रमजीवी किसानलाई पेन्सनको ब्यवस्था गर्ने कांग्रेसकाे तयारीः डा. काेइराला १२ मिनेट पहिले
कम्फर्टेवल वालाहरुले देखेकाे विदेशी हस्तक्षेप १३ मिनेट पहिले
एकतानगर बस्ती जोगाउन पक्कीनाला निर्माण गर्ने निर्णय १५ मिनेट पहिले
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि १९ मिनेट पहिले
कर्णालीका राउटेका लागि एकीकृत नीति बनाउने तयारी २८ मिनेट पहिले
कांग्रेसलाई लाग्यो महाधिवेशनः देउवामा बढ्यो सकस ३० मिनेट पहिले
कोरोनाको मुख्यथलो बन्दै रोपाइँ ३५ मिनेट पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी ४३ मिनेट पहिले
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा ५१ मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै ५३ मिनेट पहिले
रु रु जलविद्युतसहित ९ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति ? २३ घण्टा पहिले
निर्माणाधीन आधुनिक बागलुङ बसपार्क ३ घण्टा पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न २ घण्टा पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग २ घण्टा पहिले
बाढीले महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको बाँध बगायो १ दिन पहिले
आजदेखि नबिल बैंकको बैकिङ सेवा बन्द हुने ३ दिन पहिले
हेलम्बुका बाढीपीडित ४० घरपरिवारलाई राहत वितरण १ दिन पहिले
हेलम्बु क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवा विच्छेद ३ दिन पहिले
सर्वोच्च जानका लागी नागरिकतासहित संसद भवनमा भेला हुन सांसदहरुलाई निर्देशन ४ हप्ता पहिले
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई कामपाले २ करोड दिने ४ दिन पहिले
कांग्रेसका नेता गणेश लामा जरिवाना तिरेर छुटे १ हप्ता पहिले
बिरुवा गाउँपालिका ४ मा कांग्रेसद्धारा राहत वितरण १ हप्ता पहिले
मंगोलियामा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन शुरु २ हप्ता पहिले
बेलाघाट टापुमा फसेका चारको सेनाले गर्यो उद्धार ५ दिन पहिले
कोभिड कहरमा बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिन आग्रह ४ हप्ता पहिले
विश्व बैंक र आइएमएफलाई राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको आग्रह ९ महिना पहिले
बिपीको पूर्णकदको शालिक निर्माण १ वर्ष पहिले
अछाममा छाउगोठमा युवतीको मृत्यु ! २ वर्ष पहिले
एक थुनुवाको आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ १ वर्ष पहिले